Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Toherin’ny Hvm ny Hvm
Inty sy nday: Toherin’ny Hvm ny Hvm
Iray amin’ireo gazety namoaka ny fanambarana avy amin’ny Komity Foiben’ny Ffkm izahay teto amin’ny La Gazette de la Grande ile tamin’ny talata lasa teo. Ireo gazety mpitondra tenin’ny fitondrana Hvm dia tsy nihambahamba tamin’izany namoaka lahatsoratra mamely mivantana ny Ffkm ho “mpanongam-panjakana”. Dia notsiahivin-dry zareo ny nataon’ny Ffkm na tamin’ny 1991 na tamin’ny 2002…. Tsy iolakolahana fa vantanina ny resaka. Felaka tehamaina sy daka ambavafo no nataon’ny fitondram-panjakana Hvm ny Ffkm tamin’ny alalan’ny gazety mpitondra teniny tamin’izay. Ho an’ny Hvm izany dia fanonganam-panjakana no nataon’ny Ffkm hatrizay.
Tsy tokony hadinoina fa tsy olonolom-poana ao anatin’ireo gazety mpitondra tenin’ny Hvm ireo ny minisitry ny serasera Harry Laurent Rahajason.
Tamin’ny zoma teo anefa, raha nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana nenti-nanolorana ny taratasy ifanarahan’ireo mpiasa miisa 22 izay nanao fifanarahana manokana tamin’ny fanjakana amin’ny alalan’ny ministeran’ny serasera ny minisitra tompon’andraikitra ao, Harry Laurent Rahajason, dia nanamarika momba iny fanambaran’ny Ffkm iny fa “raisin’ny fitondram-panjakana ho zava-dehibe iny fanambaran’ny Ffkm iny ary raisin’ny fitondram-panjakana ho anjara birikin’ny Ffkm amin’ny fanampiana ny mpitondra izy iny…” Nolaroiny teny miendrika fanesoana moa izany, toy ny hoe “ i Madagasikara dia iray amin’ireo firenena manaja ny fahalalahana maneho hevitra, ary vokatr’izany dia samy maneho izay tiany hambara ny tsirairay, na olom-pirenena tsotra izy na filoham-piangonana…”
Izany hoe nanafosafo sy nandambolambo ny Ffkm indray teo ny mpitondra fanjakana Hvm.
Raha jerena maimaika ireo tranga roa ireo, izany hoe ny lahatsoratry ny gazetin’ny Hvm sy ny nambaran’ny minisitry ny fanaovan-Gazety Hvm, Rahajason Harry Laurent, dia mibaribary fa “ny Hvm ihany no manohitra ny Hvm”.
Tsy fantatra intsony moa ny tena fandraisan’ny fitondram-panjakana ny hevitra avoakan’ny sokajin’olona na rafitra mbamin’ny fikambanana isan-tsokajiny eto fa ny hita sy tsapa aloha dia ny ataon-dry zareo ihany no tohizany. Raha kianin’ny olona amin’ny fanamparam-pahefana ataony ny mpitondra, ohatra, dia vao mainka abaribarin-dry zareo iny avy eo. Raha kianin’ny olona momba ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana ny mpitondra, dia ohatran’ny vao mainka maniraka azy hanamafy izany ilay fanakianana. Raha ametrahan’ny vahoaka ahiahy ny mpitondra amin’ny tetika sy paika maloto apetrany dieny izao amin’ny raharaham-pifidianana amin’ny taona ho avy, dia vao maika asehon-dry zareo hoe “tsy raharahianay izay teninareo fa ny mahasoa sy mahafinaritra anay ihany no ataonay”. Sy ny maro tsy ho voatanisa eto e!
Izay no mahatonga anay hilaza indraindray hoe “dia tohizo sy hafaingano ary hamafiso àry ry Mpitondra ny fanaonareo mahazatra fa hain’ny vahoaka koa ange ny manao anareo araka ny fanaovana azy e!”
Raha azonareo atao ihany koa dia mba mitadiava mpiara-miombona antoka hafa hanafaingananareo ny fampitomboana ny fahantran’ny vahoaka e! Ary aza omena lanja izany ka hoe hoheverina ho zava-dehibe ny fanambaran’ny Ffkm satria ny Ffkm dia tsy miteny afa-tsy ny zavatra manjo ny vahoaka nefa miteraka olana aminareo mpitondra izany.